Na-akụ aka ekpe na aka nri na Dan the Man, nke ọhụrụ si Halfbrick Studios | Gam akporosis
Halfbrick na-enye Dan the Man ahụ, ikpo okwu na-adọrọ adọrọ ebe ị ga-agba ụzọ ochie
Halfbrick Studios abụghị na ọ na-ewepụta ọtụtụ egwuregwu na Storelọ Ahịa Play kwa izu, mana ọ na-eme nke ọ bụla ndị ọ na-ebipụta nwere nnukwu mma na ha bụ akara ngosi maka aha ndị ọzọ ga - amalite ịdepụta usoro ọrụ ha kachasị mma. Ọ ghaghị ịkwanye nnukwu mkpụrụ Ninja na Jetpack Joyride (nke a malitere otutu ọnwa ole na ole gara aga) dị ka ya abụọ kasị ukwuu zoro na ndị nyere anyị oké fun na afọ mbụ anyị malitere ije anyị na gam akporo; mbụ ndu ọphu nọ l'ẹka g'ọ dụ ngu; na nke abụọ maka igosi anyị ihe onye ọsọ 2D na-adịghị agwụ agwụ bụ.
Ugbu a, ọ na-alọghachi n'ọgba aghara ahụ na nnukwu arcade ọzọ nke ga-enye ndị egwuregwu niile obi ụtọ na-agafe ya maka izu na ọnwa ndị na-abịa. Dan the Man na-bụ ụlọ akwụkwọ ochie na-akụ em ihe 2D platformers nke anyi gha agha dika azu n'ime mmiri ka anyi chee ndi ozo ahu gha aghaghi. Egwuregwu vidio nke ike ịwụli gburugburu ebe obibi na nyiwe ya, yana iji ihe ọkụkụ pụrụ iche, ga-apụta ọdịiche dị n'etiti mmeri na mmeri. Otu agile Arcade na ejisie n'ezie nko gị ka i wee inyocha ndị niile na-adọ na-echere gị na ọzọ dị ukwuu egwuregwu si Halfbrick Studios.
1 Ima elu, Punch na tufuo ọtụtụ narị ndị iro
2 Ọtụtụ ọdịnaya ị kpọghee ma nwee obi ụtọ
Ima elu, Punch na tufuo ọtụtụ narị ndị iro
Dan the Man bụ egwuregwu vidio dị ike nke ị ga - enwe Ọtụtụ ndị iro na ihuenyo N'ime ha ị ga-ekpochapụ ya na jumps n'oge kwesịrị ekwesị, nnukwu kicks ma ọ bụ ọkpọ na ọkpọ pụrụ iche nke ị nwere ike iwutu ọtụtụ ndị ọchịagha n'otu oge ahụ. Ọ bụ egwuregwu vidio nke nwere dragon Double type arcade nostalgia nke ọ naghị akwụsị ịkụ na nke anyị na-eche ugbua ka nnukwu ọghọ na-esote ịbịa bibie ha niile.
Ọ bụ egwuregwu vidio dị egwu na nke anyị nwere ike nọgide na-emeziwanye nkà na Dan ga-ewere ka anyị na-enwetakwu ego ọla edo. Site na ijide onye iro na ịtụba ya na pirouette, ka ọ na-ada site na elu, anyị ga-enwe ụdị otiti dị iche iche nke anyị ga-emezi ka ọ dịrị mfe iwepụ ndị iro ahụ dị egwu nke ga-abịakwute anyị n'oge niile.
Dan Nwoke eji gburugburu nke a haziri ka ị mara ka ị ga - esi nyere onwe gị aka na nyiwe ndị ahụ ma pụọ ​​na ndị iro anọ ma ọ bụ ise ga - agba gị gburugburu oge ị ga - ezumike. O nweghi emebi emebi gburugburu ebe obibi, ewezuga vases na ihe oyiyi na-enye gị ohere igwu vidiyo nke mgbanwe ngwa agha. Otu ihe akpụrụ akpụ, ọ bụrụ na ịzụta ngwugwu adịchaghị (nke a na-ere ugbu a maka € 1,99) ga-enye gị ụdị ngwa ọgụ niile dịka bazookas, mma n’akpa ma ọ bụ egbe igwe ị nwere ike imelite ka ị na-aga n’ihu.
Ọtụtụ ọdịnaya ị kpọghee ma nwee obi ụtọ
Dị ka egwuregwu Halfbrick ndị ọzọ, lee ị na-aga ọtụtụ ọdịnaya ịmeghe. Ozugbo ị nwetara njirimara ahaziri iche, ị ga-enwe ike ịnweta ngwa na uwe iji hazie ya dịka ịchọrọ. Customdị omenala a ga-achọ ka ị nweta ego iji kwalite nkà ya na ngwá agha ya, ma ị nwere ike ịmịcha ya dị ka ninja, dị ka ọgba aghara ma ọ bụ jiri omenala ndị ahụ na-enye Dan nwoke ahụ ihe pụrụ iche.
Egwuregwu ahụ nwere ọnọdụ akụkọ na-enye gị ohere ịmụta ins na out of the game, ma o nwekwara otu lanarị na ihe omume kwa ụbọchị nke a ga - eme ka ị banye n’ọkwa pụrụ iche nke ị ga - enwe ụdị nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị maara na Halfbrick na-ewepụtakarị mmelite juputara na ọdịnaya ndị ọzọ, anyị na-eche ihu egwuregwu nke anyị ga-enwe ọtụtụ afọ na-enweghị nkwụsị osote.
Halfbrick Studios ewetala anyị ọzọ nnukwu video egwuregwu na amuses site n'eziokwu nke ima elu na igba ndi iro. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na omenala ndị a niile, iji ngwa ọgụ ma ọ bụ ike ndị ahụ pụrụ iche nke anyị nwere ike iji wepụ dragon ahụ, ọ ghọrọ arcade kachasị mma maka oge ugbu a maka gam akporo ugbu a.
Have nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google na micropayments ndị doro anya na nke ahụ 1,99 adịchaghị enye iji nweta ego ọla edo 5.000, akwa ninja ma wepu mgbasa ozi. Nke ahụ kwuru, mgbasa ozi bụ otu n'ime obere nkwarụ ya, mana ọ nweghị ihe ga-agbachi ọ theụ niile ị ga-enweta na nloghachi.
Dan the Man bụ egwuregwu nke ndị 1,99 XNUMX nke ngwugwu adịchaghị mara obere na ị gaghị ewe oge iji nweta ya n'ihi na ị maara na ị ga-enwe ọtụtụ egwuregwu ruo ọtụtụ ọnwa. Nwere a ahụkebe mma na animations, ọgụ onwe ya, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị iro na ihuenyo, ogologo etoju na-enwekwa obi ụtọ na imewe nke odide na akụkọ ihe mere eme. Arcade mara mma iji nweta ihe na-enweghị nkwụsị.
Ọmarịcha mma na ogo dị elu n'akụkụ ya niile
Ọ nwere ọtụtụ ihe ọchị ọgụ o nwere
Ọtụtụ ọdịnaya ka agbachi ma kpọọ
Otutu mgbasa ozi obu ezie na edozi ya n’uzo ozo
Dan Nwoke ahụ na -alụ ọgụ na ịkụ ọkpọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Halfbrick na-enye Dan the Man ahụ, ikpo okwu na-adọrọ adọrọ ebe ị ga-agba ụzọ ochie
Jiri ngwa agha gị mebie ndị ọbịa ahụ n'ụdị Pang kachasị na Bug Butcher
Samsung Galaxy S8 ga-abata na mbụ ma na-enweghị bọtịnụ ụlọ nkịtị